pokhara finance limited(pokhara finance limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
पोखरा फाइनान्सको लगानी प्रभु क्यापिटलले व्यवस्थापन गर्ने
काठमाण्डौ । प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र पोखरा फाइनान्स लिमिटेडबीच लगानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा प्रभु क्यापिटलका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिनेश थकाली र पोखरा फाइनान्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौतापछि पोखरा फाइनान्सको लगानी प्रभु क्यापिटलका...
पोखरा फाइनान्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत पुस ३ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफा तथा प्रिमियम कोषबबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ९१ करोड ७२ लाख ८१ हजार ७०४ रुपैयाँको कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। जसमा ५ प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड ५८ लाख ६४ हजार...
एभरेस्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र इन्फिनिटी लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कति–कति छ लाभांश?
काठमाण्डौ । एभरेस्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्तावित लाभांश सुरक्षित गर्ने आज बिहीबार अन्तिम मौका रहेको छ । तीनवटा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनाका लागि भोलि शुक्रबारदेखि बुक क्लोज गर्ने भएकाले लाभांशको हकदार बन्न आजसम्म सेयरधनी कायम भ...
पोखरा फाइनान्सको वार्षिक साधारणसभा पुस १८ गते, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । मर्जर प्रक्रिया र लाभांश पारित मुख्य अजेन्डासहित पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो २३ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । संस्थाको हिजो बुधबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा पुस १८ गते शुक्रबार पोखराकोदरबारथोक बैंक्वेटमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना...
पोखरा फाइनान्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति–कति ?
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्सको आज शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई कुल १४.२० प्रतिशत लाभाश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्सले चुक्तापुँजी ८५...
पोखरा फाइनान्सको खुद नाफा २३.६५%ले वृद्धि, रिजर्भमा ४८.२०%को छलाङ
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफा २३.६५ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । संस्थाको समीक्षा अवधिमा सञ्चालन...
चौथो आईटी गु्रप कर्पाेरेट फुटसल उपाधि पोखरा फाइनान्सलाई
काठमाण्डौ । पोखरामा आयोजित “चौथो आईटी गु्रप फुटसल प्रतियोगिता” पोखरा फाइनान्सले जितेको छ । शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा पोखरा फाइनान्सले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै जित हासिल गरेको हो । खेलमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था गरी कुल ९ टिमको सहभागीता रहेको थियो । उक्त खेलमा सर्बाेकृष्ट खेलाडी पोखरा...
पोखरा फाइनान्सले ७%सम्म लाभांश बाँड्न सक्ने, खुद नाफा रु. १०.७२ करोड
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि शेयरधनीहरुलाई ७ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने क्षमता बनाएको छ । चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । समीक्षा अवधिमा संस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफामा २.९६ प्रतिशतले मात्र...
नाफा बढ्यो पोखरा फाइनान्सको, रिजर्ब भने खिइयो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पोखरा फाइनान्स लिमीटेडको खूद नाफा बढेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा पोखरा फाइनान्सको खूद नाफा करिब २७ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्ष १ करोड ४८ लाखमा सीमित नाफा बढेर १ करोड ८८ लाखको उचाईमा पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म २ करोड ३४ लाखमा सीमित संचालन नाफा...
पोखरा फाइनान्सका लगानीकर्तालाई डबल अफर: बोनस सेयरको साथमा नगद लाभांश पनि
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई बोनस सेयर र नगद लाभांशको डबल अफर प्रस्तुत गरेको छ । फाइनान्सको साउन २८ गते सोमबार बसेको ४५४ औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफा तथा जगेडाकोषबाट ८.६८४ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्ताव अनुसार फाइनान्सले ७ करोड ९ लाख बराबरको...
पोखरा फाइनान्सको नाफामा झिनो प्रगति, खूद ब्याज आम्दानीमा गिरावट
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमीटेडको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खूद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ८ करोड ७७ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको फाइनान्सले त्यसलाई केही बढाएर यो वर्ष ९ करोड १३ लाख पुर्याएको हो । नाफामा सामान्य मात्र प्रगति भएको र चुक्तापूँजी भने करिब ४६ प्रतिशतले बढेका कारण यो कम्पनीको प्रतिसेयर...
पाेखरा फाइनान्सको पनि खुम्चियो नाफा, वित्तीय अवस्था झन् कमजोर
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म पोखरा फाइनान्सको नाफामा कमी आएको छ । कम्पनीले गत वर्षको भन्दा कमजोर वित्तीय विवरण मंगलबार प्रकाशन गरेका छ । फाइनान्सको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफामा ७ प्रतिशतले कम भएको हो । गत वर्ष यही अविधसम्ममा ७ करोड २ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको फाइनान्सले यस...
पोखरा फाइनान्सले हकप्रदको बिक्री खुलायो, कहाँबाट दिने आवेदन ?
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्सले पुस ३० गते(आज)देखि १० बराबर १.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयरको बिक्री खुलाएको छ । हकप्रदका लागि इच्छुक सेयरधनीले फागुन ६ गते भित्र आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हकप्रद प्रयोजनका लागि यो कम्पनीले पुस १३ गतेलाई बुक क्लोजको मिति तोकेको थियो । यसको अर्थ पुस १२ गतेभित्र यो कम्पनीको सेयर खरीद गरेका वा आफ्नो...
पुस ३० देखि पोखरा फाइनान्सको हकप्रद, कहाँ–कहाँबाट दिने आवेदन ?
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्सले आगामी पुस ३० गतेदेखि १० बराबर १.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयरको बिक्री खुलाउने भएको छ । हकप्रदका लागि इच्छुक सेयरधनीले फागुन ६ गते भित्र आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हकप्रद प्रयोजनका लागि यो कम्पनीले पुस १३ गतेलाई बुक क्लोजको मिति तोकेको छ । यसको अर्थ पुस १२ गतेभित्र यो कम्पनीको सेयर खरीद गरेका वा...